UMasutha ujabule ngomgomo wabaqashi abasha
UJOEL Masutha osethole umsebenzi omusha njengomqeqeshi wePretoria Callies kwiGladAfrica Championship Isithombe: BACKPAGEPIX
UMQEQESHI omusha wePretoria Callies, uJoel Masutha, ubekelwe umgomo wokugcina ubunikazi baleli qembu lasePitoli esigabeni seGladAfrica Championship uma sekuphothulwa isizini ka-2020/2021.
UMasutha unikezwe inkontileka ezophela ekupheleni kwesizini kodwa enombandela wokululwa uma enze kahle. Ufike kwiThe Romans ngemuva kokuthatha izintambo kumakadebona onguSammy Troughton ohlukane naleli qembu ngenxa yokugqoza kwemiphumela emihle.
Emasontweni edlule, uMasutha owakhonjwa indlela ngoFebruwari nonyaka yiTshakhuma Tsha Madzivhandila edlala kwiDStv Premiership, wayekhala kuleli phephandaba ngokujika nelanga ekhaya eLimpopo.
Emdlalweni wakhe wokuqala uMasutha njengomqeqeshi weCallies bebhekene neJomo Cosmos, ngempelasonto edlule eLucas Moripe Stadium, ukwazile ukuthola iphuzu bebambana ngo-0-0.
Emdlalweni wesibili obungoLwesibili bebhekene nePolokwane City ekuhambeni, babuye namaphuzu amathathu benqoba ngo-1-0 wegoli likaMuzi Mahlangu.
Ukungahlulwa kweCallies emidlalweni emibili yeligi kulandelana sekuyenze yahlala endaweni yesishiyagalolunye kwi-log ngamaphuzu awu-24 emidlalweni ewu-20.
Ekhuluma neSolezwe izolo ngomsebenzi wakhe omusha, uMasutha ubonge izikhulu zeqembu ngokumnikeza ithuba lokuqeqesha kwiGladAfrica.
“Ngijabule kakhulu ngokuphinde ngithole ithuba lokuqeqesha ikakhulukazi lapha esigabeni seGladAfrica okuyisigaba esinokuncintisana okukhulu phakathi kwamaqembu. Ukuhlala ekhaya ngingenzi lutho bekuyinto ebingemnandi neze. Manje ngiyajabula kakhulu ukuthi sengibuyelile enkundleni,” kusho uMasutha.
Ephawula ngomgomo awunikezwe yizikhulu zeCallies, uthe: “Umsebenzi enginikezwe wona ngowokuthi ngigcine ubunikazi beqembu nangesizini ezayo lapha kwiGladAfrica kwazise ngifike lingenzi kahle. Nginethemba elikhulu lokugcina ubunikazi beqembu ngizokwenza kalula kwazise ngifice lapha kukhona abadlali abanamava okudlala esigabeni seDStv Premiership nengicabanga ukuthi sizosebenzisana kahle nabo ukufeza izifiso zabaphathi.”
ICallies izobuyela enkundleni ngoMgqibelo emdlalweni weligi lapho izobhekana neJDR Stars eGiant Stadium, eSoshanguve, ngo-3 ntambama.